* Light Of Myanmar *: 9/11 နဲ့ 7/7 လူသတ်မှုကို ဒီမိုကရေစီစိတ်ဝင်စားသူတွေ မေ့ထားသင့်လား
Posted by * In Search of Truth * at 8:34 PM
I don't say US is so good and perfect. At my blog, I just express the voices from public. There is No other intentions. Anyway, thanks for sharing.
ဒီနိုင်ငံတွေအပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ ကျနော် နောက်တော့ ရေးပြပါ့မယ်။ အခုလောလောဆယ် ကိုမောင်ဆန်ခေါ် အက်မင်ကြီး တီးရှော့ကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အဖိုးတန် နိုင်ငံရေးပို့စ်အများကို ကူးယူပြီး ဘလော့မှာ တင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဟီး အခုမှ ဖတ်မိတယ်..
စီးပွားရေးသပိတ်မှောက်တဲ့ကြားက တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံ.. ရှိတာပေါ့ ကိုဇော်မျိုးနဲ့ ကမောင်ဆန်..
ခင်ဗျားတို့ နေတဲ့ နိုင်ငံ ကနေဒါကို ၂၀၀၃ က ယူအက်စ်ကနေ နွားမ၀ယ်ရ သပိတ်မှောက်လိုက်တာလေ.. ကနေဒါရဲ့ ဂျီဒီပီ ကျသွားရော.. ဒါပေမယ့် အစိုးရက တော်တော့ နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းက တအားကြီး မဆိုးရွားခဲ့ဘူး.
ကိုဇော်မျိုး.. ကျနော် တခုပြောချင်တယ်။ ဒီစာတွေက မျက်စိအကုန်ပွင့်နေတဲ့ လူမျိုးတွေ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားက မြန်မာပညာတတ်တွေကို အမြင်ပြောင်းလို့ မရဘူးဗျ..
ကျနော် လာလာဖတ်ပါတယ်။ ကိုဇော်မျိုးတို့ရဲ့ အကွက်ကို လေ့လာဖို့ပါ။ ကျနော် ပညာတိုးပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ..
This is the first time seeing the6years old cliche of 9/11 conspricy floating on burmese font.I dont noe whether this is just an another propaganda or what u guys love to do.
This is my fav 9/11 consipricy blog.
What i wana say is every goverment,even elected govs, lies and makealot of mess. What the difference is the public's legal right to expose the mess or stays silent.
Many pro- democracy and human rights people around the world, even in the US, don’t like the Bush administration.
But they don’t say authoritarian system is better than democracy for people’s happiness.
No body will like that people are afraid of hierarchy or authority.
If you read in politics indeed , you will realize Democracy is more than what you paint in your blog.
Do you think what the Bush administration did in7years is meaning of Democracy?
One of meanings of Democracy is struggle. Democracy has been struggling for at least 2500 years. So what you see in youtube is alsoapart of its struggle.
Everybody in the US can criticize Bush in American or global press. So you can ,at least, get info what is behind 9/11. You can see critical video clips in youtube through freedom of press. But do you forget to say Freedom of Press isademocracy value?
If we want to say about Buddhism, we need learn indeed.
What you write in the blog is readers to doubt that Democracy and Buddhism is opposite.
In real, what Buddha taught in basic is critical thinking, open-mind ,tolerance to dissidents , pluralism . These values are as well as in Democracy.
In Burma’s political culture, the relationship between authority and people is justasubject and subjected one. Do you like this? You could , but not most of 56 millions.
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါယုံပါဗျာ။ Bush ကိုဝေဖန်လို့ရတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ နအဖ ပြည်သူတွေကို ကျေနပ်အောင် သတင်းစာထဲမှာ လမ်းဘေးရေးမြောင်း ပုတ်စော်နံနေတာကို ထည့်ပြီးဝေဖန်ခံတဲ့ ပုံစံနဲ့ အတူတူပါပဲ။ သူတို့ BUSH ကို ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဇတ်တိုက်ပီး လုပ်ပြထားတာပါ။
Tower7ပြိုကျတဲ့ BBC သတင်း youtube ကိုပြန်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ သတင်းထောက် Jane Standley နဲ့ BBC သတင်းကြေငြာသူနှစ်ယောက် ပြောနေတာ ကြည့်ရင် အဟုတ်ဖြစ်သလို ပြောဆိုနေကျတယ် မဟုတ်လားဗျာ။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် တွေပါ။ မကြာခင်က သေဆုံးသွားတဲ့ ဒွေးလို ပေါ့ဗျာ။
ကျနော်တို့ ဆောင်းပါးတွေမှာ သက်သေတွေပြထားပါတယ်။ နောင်မှာ လဲ ထပ်ထွက်လာမှာပါ။ ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာ အားလုံးချုပ်ချယ်ထားပါတယ်။ 7/7 အကြောင်း CNN မှာ အကျယ်မချဲ့ ရဲပါဘူး။ ဒါဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်တဲ့ ကိတ်စ္စပါ။ ဘာကြောင့် အမေရိကန် ရုပ်သံဌာနက ဂရုစိုက်နေရလဲ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံး အခုချက်ချင်း ဖြေရှင်းလို့ မရသေးပါဘူး။ နောင်မှာ ဆောင်းပါးတွေ ရေးပြရင်း ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ အဖြေ ပေါ်လာမှာပါ ခင်ဗျာ။
Bush နဲ့ CIA ကို ဝေဖန်လို့ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့သူတွေ ၊ အသတ်ခံရတဲ့သူတွေ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒုက္ခပေးခံရတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့က ပညာသားပိုပါတယ်ဗျ။ လိမ်ရင် လိုအပ်မှ လိမ်တယ်။ သတ်ရင်လည်း တကယ်အရေးကြီးတဲ့ လူကိုပဲ ရွေးသတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နအဖထက် အဲဒီနေရာမှာ ပိုသာပါတယ်။ ဒါတွေ CNN မှာ မပါလို့ မသိတာပါ။ ကျနော်တို့ တဖြေးဖြေး အထောက်အထားနဲ့ ပြပါမယ်။ လတ်တလောမှာတင် စာရေးဆရာတစ်ယောက် CIA ဘိန်းကုန်ကူးတာ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့လို့ အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါအမေ၇ိက မှာ ဖြစ်နေတာပါ။
အစ်ကို ကဒေါင်းလာလည်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အစ်ကိုမောင်ဆန်ကို တီးရှော့ပြန်ဖွင့်ခိုင်းတော့ သူကပြောတယ် နအဖက သူ့ကို ကားပါမစ် သုံးစောင် တောင်းတာ နှစ်စောင်ပဲပေးလို့တဲ့။ အဲဒါသူက သုံးစောင်ရမှ ပြန်ဖွင့်မယ်တဲ့ :p ။ အခုလို ပွဲတောင်းနေပုံထောက်ရင် အစ်ကိုတို့ Blog Banner ကြော်ငြာလေးတွေ ပိုက်ပိုင်မယူပဲ တင်ပေးတဲ့နေရာ မရှိတော့လို့လား :p စိတ်မဆိုးကြေး
အစ်ကို ပြောတဲ့ ကိစ္စက ကနေဒါ စီးပွားရေး သပိတ်မှောက်တာ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ အစ်ကို ကြည့်ရတာ ရေချိန် ကိုက်နေပီထင်တယ် :p
မြန်မာတီးရှော့ပေါ်မှာ ဘန်နာ မတင်ရတော့လဲ ဘာဖြစ်လဲကွယ်..
ကိုမောင်ဆန် သတ္တိမရှိလို့သာ တီးရှော့ မဖွင့်ရဲတာပေါ့။ ပြန်ဖွင့်ရင် ကြေညာချက်နဲ့ ကျနော် မောင်ဆန်သည် တီးရှော့အက်မင်ဖြစ်သည်။ ငါပြောတာသာ အမှန်ဖြစ်သည်။ ဘီဘီစီသည် သတင်း အကုန်လိမ်သည်လို့ ထုတ်လိုက်ပေါ့။
အစ်ကိုကြည့်ရတာ မှန်တယ်ထင်ရင် အတင်းကို ပြောတာပဲနော်။ သူသာ အစ်ကို ပြောသလို အက်ဒမင်ဖြစ်ရင် အစ်ကိုတို့ သိက္ခာ အကြီးအကျယ်ကျ မယ်ထင်တယ်။ သူ့ကို အစ်ကိုတို့က နအဖလူလို့ စွပ်စွဲထားတယ်။ နအဖဖိုရမ် တီးရှော့မှာ ကျနော်တို့ စိတ်ကြိုက် ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်။ အစ်ကိုတို့ Blog တွေကို တိုးပွားအောင် တီးရှော့ကူညီခဲ့တယ်ဗျ။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားများလုပ်တဲ့ ဖိုရမ်မှာ အဲလို လုပ်ပေးလို့လား။ အစ်ကိုကဒေါင်းကြည့်ရတာ နအဖကို လူတွေ ထောက်ခံလာအောင် မသိမသာ စည်းရုံးနေတဲ့ သူများဖြစ်ပီလား။ အစ်ကိုကဒေါင်းလဲ ကားပါမစ်ကို မျှော်နေပီထင်တယ်။ ဟီးဟီး စတာပါဗျာ။ စိတ်ဆိုးနဲ့ ။ အချိန်ရရင် စီးပွားရေးသပိတ် မှောက်တာ လေ့လာပီး အစ်ကို ကျနော်မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေး ပြန်ဖြေကြည့်ပါအုံးလား ခင်ဗျာ။ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ပျော် ပါးပါးပေါ့
ကိုဇော်မျိုး အနေနဲ့ကျနော်ရေးလိုက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့သေသေချာချာ သဘောမပေါက်ဘူးနဲ့တူတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ သဘောကိုက ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းပဲ။ ခင်ဗျားပြောသလို အမေရိကန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီက မပြည့်စုံသေးဘူး စာရွက်ပေါ်မှာ ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာက ဒီမိုကရက်တစ် တွေ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေရဲ့တာဝန်ပဲ အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်တယောက်ဆိုရင် ဒီရုန်းကန်မှုမှာ အုတ်တချပ် သဲတပွင့်အနေနဲ့ပါဝင်ဖို့ ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘု့ ရ်ှအစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ဒီမိုကရေစီ မဆန်တိုင်း ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံးရမ်းပြီး ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ အလားကားပါဆိုပြီးတော့ ဆိုလို့ မရပါ။ ငါတကောကောပြီးတော့ ဆိုချင်ရင်ဆိုလို့ ရတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် ပညာမဲ့ရာ၊ စိတ်မပွင့်လင်းရာ၊ ဓမွှ ကို မသိရာတော့ကျ မှာပေါ့။
ဒီမိုကရေစီ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှု ဆိုတာက ခင်ဗျားကို သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကျွေးနေတာ၊ ခင်ဗျား အနေနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ် ကိုယ်ကို ကိုယ် ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီး ချင့်ချိန်လက်ခံဖို့ ပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့် ငါးရာ ကျော်က ဗုဒ္ဒ ဟောကြားခဲ့တာလဲ ဒီသဘောပဲ ၊ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံက လူတွေ အနေနဲ့ မီဒီယာတွေကနေတဆင့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို လက်ခံယူနိုင်ပြီး ဟုတ်မဟုတ် ဝေဖန်သုံးသပ် ယူနိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်။ ကျနော်တို့ ဆီက လူထုကတော့ လူပီသခွင့် အခြေခံ သတင်းအချက်အလက် လက်ခံယူခွင့်တောင် မယူနိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်မှု ဆိုတာ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာဖြစ်တယ်။
သူတို့ ဆီမှာ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဝေဖန်သုံးသပ်တတ်တဲ့ ချောင်စကီး တို့လို လူမျိုးတွေ အမေရိက မှာ ရှိတဲ့ တက္ပသိုလ်တွေမှာ ပါမောက္ခလုပ်ခွင်ရှိသေးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလိုပြော တဲ့ ဆရာတွေဆို ထောင်ထဲမှာ အသက်ထွက်ဖို့ သာပြင်ပေတော့။ ဒါလားဗျာ ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံ ပူဇော်ထိုက်သူတွေကို ထောင်သွင်းတာ။
ခင်ဗျား အနေနဲ့အမေရိကန် ဒါမှမဟုတ် အနောက်နိုင်ငံတွေက အစိုးရတွေရဲ့တချို့ လုပ်ရပ်တွေကို မကြိုက် တိုင်း အာဏာရှင် နဲ့ အာဏာရှင်ဆန် တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတွေက ဒီမိုကရေစီထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ တော့ ပြောလိုမရဘူးပေါ့ဗျာ။ မြန်မာပြည်၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ် နဲ့ ရုရှားက လူတွေကို မင်းတို့ ဟာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ပဲ ပိုသင့်တော်တယ်လို့ တော့ ဆိုလို့ မရဘူးပေါ့ ဗျာ။
အစ်ကိုဝေ။ ကျနော် တစ်ခုတော့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အစ်ကိုအရေးအသားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားထားတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ အဲဒီတချက်ရပ်ပေးပါ။ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာ နေတဲ့လူအားလုံးဟာ သူတော်စင်တွေချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးသန်းရွှေလို လူမျိုးရှိသလို သာမညဆရာတော်ကြီးလို သူတော်စင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာ နဲ့ ဆရာကြီးဦးဘခင်လို ကမ္ဘာလူသားတွေ စိတ်အေးချမ်းမြေ့ရေး လုပ်ပေးတဲ့ ပုဂိုလ်ထူးကြီးများ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေဟာ သူ့အဏာကို မဆန့်ကျင်တဲ့ သူတွေကို မသတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဖြစ်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတခုပါ။ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီအချက်ကို သတိပြုပေးပါခင်ဗျာ။ 9/11 နဲ့ 7/7 လူသတ်မှုမှာ သတ်ဖြတ် ခံရတဲ့သူတွေဟာ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်နေတဲ့ သူတွေပါခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူတွေဟာ ငွေရဖို့ တခုတည်းကြည့်ပီး မသတ်ပါဘူး။ လောဘ အဲလောက် မကြီးပါဘူးခင်ဗျာ။
ဒီဘက်တွေမှာ လူလူချင်း ချစ်ခင်တယ်ဆိုတာ ပေါ်သဘောပဲရှိပါတယ်။ နောင်မှာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ အစ်ကိုတို့ အမျိုးဘာသာကို တိုက်ခိုက်လေ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။ ကျနော်စကားနည်းနည်း ကြမ်းသွားတဲ့အတွက် စိတ်မရှိပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ နားလည်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ အားထားနေတဲ့ DVB BBC သတင်းတွေဟာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ စည်းလုံးရေးကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ သတင်းလိမ်တွေ၊ သတင်းချဲ့ကား တာတွေနဲ့ လူတွေကို ၀ါဒမှိုင်းတိုက်တာတွေ စံနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နေကျပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့သူတွေကို ကြည့်ရင် သာမန်လူသားတွေ ရှိထိုက်တဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား သူတို့မှာ မရှိကျတော့ဘူးဗျာ။ ဗုဒ္ဓဆုံးမထားသလို သတိနဲ့ထားပီး အမှားအမှန်ကိုလဲ သုံးသပ်နိုင်ဖို့လဲ သတိတရားတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ စိတ်မကောင်းစရာ ပါပဲဗျာ။
အစ်ကိုပြောသလို ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဟာ မိမိကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခွင့် ပေးတယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ သမားတွေရဲ့ အပြုအမူကို လေ့လာကြည့်ပါအုံးခင်ဗျာ။ အစ်ကို ကလိုစေးထူးဆိုရင် နအဖထံကနေ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် ရရှိရေး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ စာရေးဆရာကြီး တယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူBlog မှာ ကျတော့ လွတ်လပ်တဲ့ အမြင် ထုတ်ပိုင်ခွင့် လုံးဝ မပေးဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဆိုတာ လက်တွေ့မှာမရှိဘူးဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်က ဒီမိုကရေစီစံနစ် တကယ်မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ လက်တွေ့ အကျဆုံးကတော့ဗျာ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကို ဒီမိုကရေစီ ပီပြင်လာအောင် အုတ်တချပ် သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်လာရေး စည်းရုံးရင် အချိန်တော်တော်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်နေတဲ့ သူတွေ ဒီမိုကရေစီ ပါးစပ်က မဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ လက်ခံလာအောင် ကျိုးစားကြည့်ပါလား။ အမြင်မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်ခံစဉ်းစားရဲအောင် စည်းရုံးကြည့်ပါလားခင်ဗျာ။ အဲဒါအစ်ကို ဦးစားပေး လုပ်သင့်တယ် ထင်တယ်ဗျ။ ဆရာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ အစ်ကိုကလိုစေးထူးလို အဓိကလူတွေ ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ပံကြေးရဖို့ ထက် တကယ်လက်တွေ့ လုပ်လာရင် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် စိတ်ပြောင်းဖို့ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။
ကျနော်ရေးသားခဲ့ တဲ့ စကားလုံးတွေထဲမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာကို စော်ကားခြင်း မပါမိသေးပဲ၊ စစ်မှန်သော ဗုဒ်ဓ ဘာသာကို ကာကွယ်ခြင်း (၀ါ) ဗုဒ်ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို တလွဲအသုံးချခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းတွေသာ ပါပါတယ်။ ဗုဒ်ဓရဲ့ တရားက ဆန့် ကျင်ဘက်အမြင်တွေ ဝေဖန်မှုတွေကို လက်ခံခြင်း၊ ပြသနာတွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီလိုမျိုး သဘောတရားတွေကို ဒီမိုကရေစီသဘောတရားတွေထဲမှာလဲတွေ နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တိုအနေနဲ့ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ လေ့လာကြမယ်ဆိုရင်၊ မဟာလူသား ဗုဒ်ဓ(မြတ်စွာဘုရား) ပွင့် ခဲ့တဲ့ ကာလနဲ့ဒီမိုကရေစီ ဓလေ့ democracy culture စတင်အမြစ်တွယ်ခဲ့တဲ့ ဂရိမြို့ ပြနိုင်ငံများ ခေတ်တို့ ဟာ သိပ်မကွာဝေးလှ တာတွေရပါမယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျားပြောသလို မြန်မာပြည်မှာ သူတော်စင်တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် သိသလောက်တော့ အဲဒီသူတော်စင်ကြီးတွေက ကျနော်တို့တပ်ချုပ်ကြီးနဲ့ အပေါင်းပါတွေကိုတော့ ခင်ဗျား ထင်သလို ဗုဒ်ဓဘာသာဝင် သူတော်ကောင်းကြီးတွေလို့မပြောကြ မထင်ကြပါဘူး။ ခင်ဗျားပြောသလို သူ့အာဏာကို ဆန့် ကျင်တဲ့လူတွေကိုပဲ သုတ်သင်တယ်ပဲဆိုဆို ဒါကိုက ဗုဒ်ဓတရားတော်တွေကို ချိုးဖျက်ရာ ရောက်နေပြီ၊ ဒါဟာ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမြောက်သလို၊ လူသားမျိုးနွယ်စု ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှု လည်းမြောက်ပါတယ်။ ကျနော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက ဗုဒ်ဓရဲ့အဓိပါယ်ကိုက အမှန်ကိုသိခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျား အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်လို့ သတ်မှတ်ထားရင် အရှိကိုအရှိအတိုင်း အမှန်ကိုအမှန် အတိုင်း အ၀ိဇ်ဇာ မဖုန်းပဲမြင်ဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ ဗုဒ်ဓ၀ါဒကို မူပိုင်လုပ်ခွင့် မရှိပါ ဆိုတာကို သတိချပ်စေချင်ပါတယ်၊ ဗုဒ်ဓ ဓမ်မ တွေဟာ ဗဟုဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအတွက် ဖွင့်ပေးထားပါ တယ်။
ခင်ဗျား ပြောတဲ့ နိုင်ငံစည်းလုံးရေးဆိုတာ ဘာကိုဆိုလဲတွေ ကျနော်မသိပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်လေ့လာမိ သလောက်၊ ဥာဏ်မှီ သလောက်တော့ တရောင်တည်းချယ် ဆိုတာ နိုင်ငံစည်းလုံးရေး မဟုတ်ပဲ။ အဓမ်မ သွပ်သွင်းခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းလုံးခြင်း (၀ါ) ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ အရောင်အသွေး စုံစုံ လင်လင်နဲ့ ပန်းတိုင်းပွင့်တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ့။ မှန်တာပေါ့ဗျာ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူလည်း သတိရှိ ရမယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်း သတိထားရမယ်၊ ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့ လည်း သတိထား ရမယ်။ ဘာအတွက် လဲ။ အမှန်တရားနဲ့ မဝေးသွားရအောင်နော်၊ ဒါကို သတိထားရမယ်။
အေးဗျာ၊ ခင်ဗျားယုံတဲ့ ဒီမိုကရေစီ မရှိဘူးဆိုတာက ဗုဒ်ဓအယူအဆ ကျင့်စဉ် လည်း မရှိဘူးလို့ ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဗုဒ်ဓဟောကြားချက်တွေမှာ ဒိမိုကရေစီဆန်တာတွေ ပါနေလို့ ပဲ။ ဂရိဒီမိုကရေစီ ထက်စောတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လူယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အမြုံတွေ civilizations with democracy ဟာ ဗုဒ်ဓ၀ါဒ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယ က မြို့ ပြနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်များက ဆိုတာ လေ့လာ မှတ်သား စရာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ဂရိစကားလုံးကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်တော့ ပြည်သူတွေဆီက ဆင်းသက်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး (၀ါ) အာဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ The word democracy derives from the ancient Greek demokratia (δημοκρατία), formed from the roots demos (δημος), "people," "the mob, the many" and kratos (κρατος) "rule". တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူ့ ဆန်ဒ နဲ့အညီ အုပ်ချုပ်ခြင်းပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ ခင်ဗျား က ဒီမိုကရေစီကို လက်မခံဘူးဆိုတော့ ပြည်သူ့ ဆန်ဒ ကို လက်မခံတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။
ကျနော် သုံးသပ်ချက်မှားတယ်ဆိုရင် အဲဒီအဆိုကို ရုပ်သိမ်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုစကားနဲ့ အယူဝါဒကို လက်ခံလာအောင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အသုံးမပြုဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အထင်အမြင်လွဲစေတဲ့ အပြောအဆိုမလုပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အခုအချိန်မှာ အမှားအမှန် ဝေဖန်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစတွေ ပြောက်ကွယ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပါ။
ကျနော် တစ်ခုအသေအချာ ပြောနိုင်တာကတော့ အစ်ကို ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောမပါက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အစ်ကိုအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒရေးရာတွေကိုပဲ ဆက်ပြောနေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့ မှာ ဒီမိုကရေစီက ဘယ်လိုပုံစံလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်ပေါ်မှာရေးထားက စာလုံးတွေအနေနဲ့ပဲရှိနေတာပါ။ လက်တွေ့လောကထဲမှာ မရှိရင် ဘာအတွက် ကျနော်တို့ အချိန်ကုန်ခံပြီး ရုံန်းကန်နေမှာလဲ။
Bush နဲ့ Tony Blair လူသတ်တာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် အရေးမကြီးပါဘူးခင်ဗျာ။ အရေးကြီးတာ ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲလို့ အမှန်အတိုင်း မြင်လာရတဲ့ အချက်ပါ။ ဒီမိုကရေစီဟာ စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ လွှတ်တော် ကိုယ်စလှယ်တွေနဲ့ သတင်းဌာနတွေရဲ့ အပြုအမူနဲ့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီဝါဒကို စာလုံးအနေနဲ့ပဲ ရေးသားနေခြင်းဖြစ်ပီး တကယ်တော့ အာဏာရှင် ၀ါဒကို စွဲလမ်းနေသူတွေပဲ မဟုတ်လားခင်ဗျာ။ အစ်ကို ကလိုစေးထူးရဲ့ လုပ်ရပ်က အရမ်းသိသာနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ ၀ါဒရေးရာမှာ နစ်မြောပီး အိမ်မက်လှလှလေး တွေမက်နေလား လို့လည်း တွေးမိပါတယ်။
sound like you are living in Canada. If you believe Democracy is only on the paper, why don't you live in countries like china, Vietnam, North Korea and Burma. You said China are well developing without having democrcay. Why don't you live there, I know you definitely don't want to live in North Korea and Burma. What kinds of system are you proposing if you believe democracy is justalie on the paper.
p.s. We all know that there isalimitation in practicing of democracy. "I will protect, with all my power, your right to disagree with me." That is the beauty of democracy.
Wow. I wish I read this thread before hand, then I would at least realise where you were coming from ko zaw myo and probably not even bother reading the rest of your blog.
I mean seriously! Conspiracy theories! I can't even understand how you can say some of the things you do inaserious 'tone'. First of all, with regards to 9/11, at least they managed to identify someone as the culprit and despite their inability to capture bin laden, they are at least doing something. And ofcourse, at least binladen is not their head of state as Than Shwe is. Second, for the7/7, they did identify the people responsible and arrested people. How could you say it was not in the news? It was the only that was on the news and I am sure inacountry such as Canada you would've gotten that information. Or have you only been watching the particular 'tv' that tells you about the various conspiracy theories such as seeing 'a face' in the smoke from 9/11 or something?
As for your 'examples' of countries not succeeding with democracy? How exactly are you definding prosperity? You say that it was great under Suharto but went down hill under 'democracy'. I believe suharto caused the 1 dollar to become equivalent to about 100,000 rupi if i remember correctly. Something simiar to what Than Shwe is doing really. And really, Indonesia could hardly be calledathriving democracy when the latest president was 'elected' when the military surrounded the presidential palace and 'requested' the president to step down. Hmmmm.. similarities, anyone?
As for China. HA! Where do you start? The current course of China's economy could hardly be called true communism which is the only reason why it's achieving suchamassive economic growth. And please don't try to separate the economy from the political system. If you have read up and reviewed the issues as you claimed to have, I am sure you would realise that true communist ideals are not something China is working on at the moment. And when they were practised with the rise of Mao? Again, as well read as you are, I am sure you realise how 20 million directly asaresult of stravation. But please, do continue if you insist. China's system works because it decided to integrate the free market ideas into its system.
And young people, well. I certainly confess to not caring that much about the elections when I was 18. Growing up withinademocracy provides you withacertain complacency that and voting does not appear asanovel action. Plus, there is the whole anti-authority issues etc that is very prevalent. Simply put, young people do not quite realise the power they have which is why they don't vote. I thinkabetter example is that people once they start voting, don't suddenly decide to stop and that is more telling than not starting. If it's as terrible as you make it out to be, would there not be massive drop outs after one or two elections?
I realise this has only addressed about three points of your own rant but I am sure you'll have coming up with calm, collected and rational sounding arguments to counter this. But really, as I've stated in another comment. A broken mirror, no matter how perfectly put back together, will still be broken. And arguments, no matter how rational sounding, are still wrong if they are based on flawed information. Pfft conspiracy theories indeed.
CNN, BBC တို့က ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတွေ မကောင်းလုပ်သမျှကို Conspiracy Theory ဆိုပြီးနာမည် တပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော် တစ်ခုလောက် မေးကြည့်ပါမယ်။ 9/11 မှာ ခရီးသည်တွေက အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ပြန်တိုက်ခိုက်တာကနေ Flight 93 လေယဉ်ပျံ ပျက်ကျခဲ့တယ်လို့ အစိုးရ ကြေငြာပါတယ်။ Conspiracy Theorist တွေက လေယဉ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ၂ မိုင်ပတ်လည်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့အတွက် ကောင်းကင်မှာ ပေါက်ကွဲတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အစ်ကို ဘယ်သူပြောတာကို လက်ခံမလဲခင်ဗျာ?
ချရေးပေးထားတာ ကောင်းတာပေါ့ဗျ။ သူတို့ အမှားတွေကို ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ခေတ်ကျ မမှားရအောင် ဆင်ချင်နိုင်တာပေါ့။